OPDOn Jiraachuuf Uummata Oromoo Wajjin Araaramuun Dirqama! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOPDOn Jiraachuuf Uummata Oromoo Wajjin Araaramuun Dirqama!
Damee Boruu: Amajjii 06/2021
Amma bara 2018 waraanni Wayyaanee ammam akka of tuuluu, uummata keenya akka tufachaa fi dhidhiitaa ture ni beekna. Waraana Wayyaanee meeshaa waraanaa amma funyaan isaa gahutti hidhatee waan bara baraan jiraatu itti fakkaata ture. Garuu irree tokkoon ka’ee uummatni keenya harka qullaa waraana Wayyaanee akka hudduu qabee of irraa darbee seenaa kaleessa ijaan agarre. Badii OPDOn TPLF wajjin dalagaa turteef Uummatni Oromoo dhiifama godheef akka aangoo qabatu eehamuun dagatamuu hin qabu. Haa tahu malee warrii OPDO fugisoo fi fallaa dirqama fudhatanii hojjechaa jiraachuun isaanii baayye nama gaddisiisa. Waan qajeelaa hojjechuudhan uummata isaaniif galata galchuun isaanii irraa eegama ture.
Waraana Wayyaanee Uummatni Oromoo harka qullaa of irraa buqqise RIB PP, Waraanni Eritrea, Faannoon Amhaaraa, Waraanni Somalee fi Dronii Emirates dabalate dabsachuu hin dandeenye. Waraanni Tigray irratti baname jabaatee lafa irraa wal haxxa’aa jiru. Dubbiin lola tokko injifachuu utuu hin taane waraana injifachuu dha. Waraana kan injifatuu immoo humna uummata qabate akka tahe mamiin hin jiru. Uummata Tigray eenyu akka of harkaa qabu turree ilaalla. Uummatni Tigray akka TPLF wajjin jiru filmaata godhame irratti ifa godhee jira.
Waggaa sadan darban kana keessa warri OPDOn maqaa yeroo sadii jijjiirratanii jiru. Maqaa isa kam akka jaalatan waan hin beekneef an maqaa isaanii isa dhugaa fi isa duraanu ittiin bekamaniin isaan waama.Yoo rakkina qabaate dhiifama. Namoonni achi fageessinee ilaaluuf dandeettii qabnu dhugaa jiru waliif himuun gaarii dha. Namoonni yaada nama duuchaan abbaran akkuma jiran yaada namaa xinxalanii ilaalanii kan isaanii tahu keessa kan fudhatan akka jiran ifaa dha. Warri sammuun duudaa fi olaantummaa siyaasaa har’a qabaniin of bokkoksan immoo guyyaa isaan gaaban ni dhufa. Waan haala akka har’a jirutti hafu hin jiru. Badii fuula keenya dura jiru xinxaluun dirqama tokko tokko keenyaa ti.
Erga Kononeel Abiyi aangoo qabatee amma yoonaa kallattiin siyaasaa hordofaamaa jiramu waan daandii irraa maqee jiruuf akka sireefatu utuu of hin qustan yaadaa hiruuf irraa booda hin jenne. Inni garuu waan finxaaleeyyi Amhaaraa fi nufxanyootan marsamee jiruuf yaadaa fi gorsa beektoota Oromoo irraa fudhachuu lagatee jira. Haala qabatamaa ammaan kana jiruun mootummaa isaa qofa utuu hin taanee inni maataan isaa akka nama tokkotti hallayyaa gubaa jira. Isatu of darbaa fi finxaaleeyyi Amhaaratu isa darbaa teenyee ilaala.
Kononeel Abiyi qilee bu’ee dhiisee finxaaleeyyiin Amhaaraa fi nafxanyoonni OPDO maqaa Bilxignaa Oromoo jedhu qabatee hafte lafa irraa duguganii balleessuuf qophaa’aa jiru. Kononeel Abiyi balleessuuf waraana isaan hin barbaachisu. Shaakala isaa bara dheeraaf qabu. Halkan tokkotti summii nyaachisaanii yookan obaasanii of irraa gageessuuf beekumsaa fi dandeettii bara dheeraa qabu. Seenaa isaan keessatti aangoo irratti namicha dhaloota saba biraa jedhan yaadan miti obboleessa isaaniifu garaa hin laafan. Ammaa yoona kana isa tursiisan waan isa ergachaa jiraniif. Kana booda kadhatee kan isaanii fiduu dubbatee kan isaanii dhageesisu akka hin jirree arganii jiru. Kanaafuu karaa midiyaa isaanii fi aktivistoota isaanii maqaa isaa xiqqeessuu fi xurreessuu itti boba’anii jiru. Nabiyyuu tahuun isaa duruu raawwate.
Warri OPDO yookan Bilxiginaa Oromoo ofiin jettan dammaqaa ija banadha. Yaroon uummata keessan wajjin araarmtan amma. Humna adda Oromiyaa fi pooliisii Oromoo warra uummata Oromoo reebu, hidhuu fi ajjeessu adabbii itti godhaa. Mirgi dhala nama Oromiyaa keessatti cabaa jiru iyyuu boru hunda keessan isiin gaafachiisa. Ammam akka aangoo sana irra turtan hin beekamuu. Umurii keessan guutuu jiraanna jettanii kan yaadan yoo tahe of gowwomsaa jirtu. Waan hojjechaa jirtan hunduu yakka waraanaa akka tahe hubadhaa. Utuu Uummatni Oromoo isin dhiisee seerri isin hin gadhiisu.
Karaa biraa finxaaleeyyiin Amhaaraa fi nafxanyoonni diina duraa isin godhachaa jiru. Isin immoo maal gochaa jirtu? Kononeel Abiyi ammaan booda yooma akka isin dhiisee deemu hin beektan. Isa malee maal gochuuf deemtu? Uummata keessaan saamaa, reebaa, hidhaa fi ajjeessaa jirtu. Uummata keessan dararuun haa dhaabbatu. Uummatni keessan isinitti gaddee jira. Miilatti kufaatii araarfadha. Waan uummatni isiiniin jedhu dhageefadha. Waan ofii barbaaddan akka isinitti himu hin yaadina.
Karaa biraa abbaan biyyaa akka injifatu hin mamiina. WBOn abba biyyaa ti. WBOn uummata Oromoo wajjin jira. Humni Uummata Oromoo injifatu hin jiru. Kan isin baasuu WBO wajjin walitti hirkachuu malee wal dura dhaabbachuu miti. Hawwii fi dhaabbiin Finxaaleeyyii Amhaaraa fi nafxanyoota dhiifama tokko malee lammaan keessanuu lafa irraa duguganii balleessuu dha. Yoo dhugaan kun isinii liqifamuu dide akka badan beeka. Kanfuu lafa jala wal hubannaa gootanii yoo WBO wajjin walitti hirkatan badii jalaa ooluu dandeessu. Yoo ilaachi siyaasaa keessan illee adda tahe ilmaan abbaa tokkoo waan taataniif wal dhabamsiisuun bu’aa isiniif hin qabu. Garaagarummaa keessan illee karaa nagaa fixachuu dandeessu. Uummatni keenya illee hiyyuma, beela, dhukkubaa, waraana hammaa jalaa olshuu dandeessu.
Hooggantootaa fi ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti dararaa jirtan hatattamaan gadhiisaatii akkaataa itti waliin hojjechuu dandeessan irratti marihadhaa. Isaaniin mana hidhaa keessaa baasuun waan isaan gargaaruuf gochaa jirtan miti. Akka mataa keessan badii jalaa baasuuf hojjettan gootanii fudhachuu qabdu. Jaal’attanis jibbitanis finxaaleyyiin Amhaara fi nafxanyoonni Bilxiginaan Oromoo fi qabsawwonni Oromoo waliin hojjechaa jiru jedhanii olola bal’aa oofaa jiru. Kan isaan har’a nama hundaa dura Baahir Daar geessanii fanniisuuf deeman Shimalis Abdiisaa yoo tahu karaa keenya garuu yakka uummataa fi ilmaan Oromoo irratti inni hojjetu jibbina malee isa jibbaa hin jirru. Akka inni fannifamus hin barbaannu, akka inni uummata isaaf hojjetu malee.
Gadaan Gadaa Xumura Bilisummaati!